Chiyeuchidzo cheMH17 maziso akanaka anoona ose mumucheka '
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 31 August 2016	• 12 Comments
MuVijfhuizen imomo munguva pfupi iri kutevera ichange iine chikumbaridzo chekuyeuka avo vakaurayiwa nenjodzi yeMH17. Icho chiito cheNational Monument MH17 Foundation. Chinonyanya kuuraya ndicho chiratidzo chechivako. Takasarudza ziso rinotarisa rose riri mubhidhi ribbon (ribhoni), sezvinogona kuonekwa pamanzwiro emufananidzo wechitsuwa chiri pasi apa. Mukuwedzera, [...]
Samsung, Google, Cybernetics uye kubatana kwepanyama pakati pemunhu nemichina
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 30 August 2016	• 1 Comment
Cybernetics ishoko rinouya kubva muchiGiriki κυβερνήτης (kybernētēs, mate) uye ndiro sayenzi inobata nekutonga kwezvinhu zvipenyu uye magetsi kuburikidza nemhinduro. Chicyborg (yeChirungu cybernetic mhuka kana cybernetic mhuka) ndiyo kubatana kwepanyama kwevanhu nemichina. Aya mazwi anofadza kuisa [...]
David Bowie anofa mazuva 2 mushure mokunge 69 zuva rokuberekwa
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 11 January 2016	• 18 Comments
Mazuva maviri mushure mekuzvarwa kwake, mharidzo inooneka kuti munyengeri Aleister Crowley mutsigiri David Bowie akafa pazera re 69 nguva pfupi mushure mekutumira album yake itsva 'Blackstar'. Rufu rwaBikeie rungangodaro runotyisa nevevanhu. Akanga akaremekedzwa uye ainyatsozivikanwa, kana asina kunyanya, muimbi. Icho chinenge [...]
Tsvaga zvinorehwa nechechi yeKrisimasi
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa10 December 2015	• 6 Comments
Kuti uwane chinangwa cheKrismasi, chiri chekuchera munhoroondo. Icho chinotanga chiduku chiduku: Munzira yechihedheni yechiNordic, 12 yakatsva kwemazuva pamusoro pomuti mukuru wemuti apo mhuka nevanhu vaipiwa mukuremekedza huMwari Yule. Chituti chemuti chinomiririra mazamu evanhu. [...]
Waiva 911 here 'Chimiro chemuzana remakore' chakaimbwa ne Supertramp mu 1979?
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 19 October 2015	• 33 Comments
Purogiramu yekupedzisira ndaive neshamwari mumotokari iyo yakanyatsonakidzwa neboka re Supertramp, kubva mumakore '70. Saka mimhanzi yakasimuka uye kuva vakatendeseka, ndakaifarira izvozvo. Munguva yapfuura ndawana mimhanzi ichiita kuti iite, inofadza uye inonakidza. Akandiratidza chinyorwa che album 'Breakfast in America' kubva [...]
UIslam inewo yeSaturn yechechi chikamu 2
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi we30 September 2015	• 14 Comments
Nhasi ndakapa nyaya yandakapa maonero angu pamusoro pekuvapo kwekufananidzira kweSaturn muIslam. Ikoko zvakanyanya kunyanya kuKaaba kuMecca uye kuenzaniswa nechekuchamhembe kweSaturn. Izvi zvingasava nharo yakasimba kune vakawanda. Ichokwadi hachisi chinangwa changu [...]
Nokuti ndine vazhinji vevateveri veMuslim paIndaneti, ndinogara ndichiwana mubvunzo wekuti ndinogona sei kutaura kuti chitendero chiratidzo chechitendero cheSaturn. Pakutanga, ndinoda kujekesa kuti ndinoremekedza vanhu vanonyanya kutaura nezvekutenda kwavo. Vanowanzonyanya kufunga nezvehupenyu hwavo uye vane [...]
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi we21 September 2015	• 10 Comments
Munhu wose anotamba gitare akaimba rwiyo rukuru 1x muhupenyu hwake, asi zvichida kakawanda. Ichokwadi kuti iyo inonakidza chaizvo gitare uye iyo solos munziyo yakasiyana nenguva yake. Musoro wacho wakagara uchinyatsonzwisisika, asi izvi zvinowanzoitika nemimhanzi inonyatsozivikanwa [...]
CERN, Shiva, Vedas, Saturn uye kuparadzwa kwakarongwa kwevanhu
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 17 August 2015	• 6 Comments
Kuti uenderere mberi nekuverenga ichi chinyorwa, iwe unogona kuve nhengo nekudzvanya pane rako 'tsigiro' bhatani. Izvi zvinokupa iwe kuwana kuzere kwechinyorwa ichi. Ichi chikumbaridzo chinodiwa nekuti unofanirwa kuve wakatanga kuverenga bhuku. Iwe watove nhengo kubva € 2 / mwedzi uye saka nditsigire kuti ndipfuure […]
Zviratidzo mumhepo kubva munguva yekare zvinotsanangura piramidi, 'ziso rinotarisa zvose' nezvimwe
Akaiswa mukati SYMBOLIC	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2015	• 1 Comment
Waiziva here kuti matongo ekuchera matongo ave awana mammoth, aine zvimwe zvekudya mumuromo? Ndinoda kutaura newe pamusoro pazvo, nokuti inoratidza kushanya kamwe kamwe, kuitira kuti zvakasara zvakachengetedzwa zvakanyanya. Madzimai aya aigara kumativi ekumusoro, uko pakangove pasina mazamu makuru evha, sezvatiri isu iye zvino [...]
Total Visits: 1.242.142